Savorovoro tany Ambatondrazaka :: Olona valo naratra tamin’ny fifandonana foko roa • AoRaha
Savorovoro tany Ambatondrazaka Olona valo naratra tamin’ny fifandonana foko roa
Vokatry ny tsy fitoviankevitra no nitarika tamin’ny fifamonoana teo amin’ny foko Antandroy sy ny Sihanaka, tany amin’ny kariera fitrandrahana vato tany Andilana Avaratra-Ambatondrazaka. Olona valo no naratra. Soa fa tonga haingana ireo mpitandro filaminana nifehy ny an-daniny sy ny an-kilany.
Nanomboka ny antoandro ka hatramin’ny hariva ny fifanenjehana sy fifamonoana teo amin’iretsy foko roa iretsy tany Ambatondrazaka. Disadisa sy lonilony efa nisy tao amin’ny toeram-pitrandrahana vato izao nitera-doza izao, araka ny fitantaran’ny loharanom-baovao any an-toerana.
Tsy mbola mazava loatra ny antony niaingan’ny fifamaliana teo amin’ny lehilahy roa, Antandroy sy Sihanaka, ary nampiitatra ny zava-nisy. Tonga hatrany anaty ala zetra, andrefan’ilay toeram-pitrandrahana, ny fifanenjehan’ireo foko roa, omaly hariva, izay nitrangan’ny fifamonoana. Manaraka fitsaboana ao amin’ny toby fitsaboana fototra faharoa any Amboavory ireo naratra.
Fanariana mpandeha :: Mpamily taksibe nosamborin’ ny polisy
Herisetra ara-pananahana :: Ankizivavy 11 taona bevohokan-drainy